I-tonal cream okanye ipowder engcono
Ubuhle bomfazi Iifake Tone
Ikhumba elifanelekileyo linokuqhayisa inani elincinci labasetyhini. Ukuze ufihle iimpazamo, ibhinqa isebenzisa i-cream yolking, okanye ipowder.
Umbuzo omdala wabasetyhini, isiseko okanye ipowder engcono. Impendulo ayifani ngokungafaniyo neenkcukacha ezimbini zeengxowa zezonyakatho, okumele zibe khona ngokufanayo. Iimveliso zamanitha zanamhlanje zinezinto eziyinkimbinkimbi zokunyusa, okugcina kugcinwe umswakama phezu kwesikhumba. Ukwenza oku, ngokuqhelekileyo usebenzisa i-gel nge-aloe vera, i-extract ye-chamomile kunye ne-calendula. Ezi zicatshulwa zikunceda ukuphilisa ama-microcracks ebusweni.
I-tonal cream inikeza umthunzi othandekayo kwesikhumba, yenza isikhumba siphumeze kwaye senze imisebenzi emininzi eyahlukeneyo. Kodwa kuqala kufuneka udibanise ne-cosmetologist ukukhetha isiseko esifanele kunye ne powder.
Ngesikhumba esiqhelekileyo kunye nokungabikho kweziphene ezibonakalayo, kunokwenzeka ukusebenzisa i-cream and toning cream-fluid engabonakali kancinci.
Ngenxa yempembelelo yombala wesikhumba, kubalulekile ukusebenzisa isiseko esikhumbeni ngokuchanekileyo. Kwimeko xa ukhilimu utywala, ifakwa ngokubamba ukukhanya phakathi kobuso, kwaye uphela kwimida. Ukulungisa umphumo, kufuneka usebenzise umgca obuncitshisiweyo we powder ngaphezulu kwesiseko. It isetyenziswe ngokululaza ubuso.
Ukuba ufuna ukufaka isalathisi esingaphezulu, ibrashi yepende kufuneka ibe yome. Ukwanela umququzeko wokusasaza kunika isiseko ngendlela yepensile, phantsi kwayo unako ukufihla ngempumelelo i-capillaries. Faka isicelo kulo mzekelo, isiseko silandelwa ngetampu ekhethekileyo, kwaye yenziwe ipensela.
Ukuba unesikhumba esinamafutha, kufuneka uthenge isiseko esisisiseko ngaphandle kweoli, okanye izilwanyana zonyango. Ukulungisa isiphumo, phezulu kwesiseko, hamba ngebhayisiki kunye ne powder.
Ngokuhlanganiswa kwesikhumba esifanelekileyo ukhilimu wamanzi ngefuthe le-tan.
Kwesikhumba esomileyo, iitoni zamanzi zifanelekile ngempembelelo, ebusweni bunjalo bubukeka bendalo. Ukuba isikhumba sakho siphelile, sebenzisa ikhambi elincinci le-tonal. Ukufaka isicelo kufuneka kube sempompo, ukuze ungagxininisi imibimbi. Ngesikhumba esomileyo, sebenzisa i-powder compact enobuciko obuyi-silky.
Ukukhethwa ngokuchanekileyo umbala wekrimu yezwi-frequency, ayifaki ebusweni bakho - imaski. Ngaphambi kokuba ukhethe isiseko, sisebenzise kwisihlathini - kufuneka simelane nombala wesikhumba sakho. Xa ukhetha i powder compact, khumbula ukuba kufuneka ibe yi-tone elula ngaphezu kwesiseko.
Ukuchaneka ukubeka i-cream-frequency cream, isiqinisekiso sempumelelo yakho!
ukuqala, ukuphucula isikhumba sakho ngekhilimu. Ukuba ukhilimu wakho unamafutha kakhulu, ulinde ufikelele ngokupheleleyo, okanye udibanise ngeethambo. Kwi-moisturizer kungcono ukusebenzisa i-tonal, ngoko kungcono ukuxhamla.
Qalisa ukusebenzisa isiseko ukusuka phezulu ukuya phezulu.
Ebusuku, qiniseka ukuba uhlambulule ubuso beemali zesiseko, kwaye usebenzise umququzeleli.
Ukuba uthe walungisa kakuhle umbala wesiseko, ke akukho imfuneko ukuyisebenzisa entanyeni.
Kwinqanaba lokukhula kweenwele, smear isiseko esifanelekileyo.
Ukusebenzisa i-cream-frequency cream iyimfuneko kuphela kwikota yeyure, emva kokukrazwa kwexesha elilodwa ukhilimu, ukwenziwa ngokuhlukileyo kuya kuchithwa.
Zama ukusebenzisa i-makeup ekukhanyeni kwemvelo, ukuba awuyikufumana, yenza isilungiso sokwenzela ukuqinisekisa ukuba uvela ekukhanyeni okubonakalayo kwendalo. Kwaye imifanekiso iya kufunda ngokuchaseneyo, kunokuba ubona ngoku kwisibuko. Khawucinge nangendawo oya kuhamba ngayo nale ndlela yokwenza, luhlobo luni lokubhengezwa luya kubakho. Yenza ukulungiswa kwesi sibane.
Indlela yokukhetha isiseko esifanelekileyo?
Indlela yokufaka ithoni kumntu
Ukuchaneka ngokufanelekileyo ukusebenzisa isiseko ebusweni
Icandelo 2. Ukusetyenziswa kwama-acid kwi-cosmetology
Impembelelo yeGalatea: ukulungelelanisa - ukukhangela okusha
Lahla i-freckles: ngokukhawuleza, ngeendlela zasekhaya
Indlela yokukhetha igama lomntwana wakho
UMila Kunis: wase-Ukraine ukuya eHollywood
Indlela yokukhetha umshini wekhofi we-espresso ukusetyenziswa kwekhaya
Imibala ekhanyayo yehlobo e-Mystery Joy ijonge ukusuka kwi-NIKI
Ukwenza izimbali kunye neengoma zeentyatyambo
Udidi lweCarbonara lweklasi
Indlela yokusebenzisa i-eyelash
Indlela yokulahla iphunga lokukhupha izicathulo
Umtshato weRetro ngesitayela esithi "Tiffany"
Ukunxila kunye nokunxila u-Anastasia Volochkova waphinda wamothuka kwi-intanethi
Cocktail "Yonke into ilungile"
Iipatapake zepatato ngamakhowe
Yintoni eyenza umsebenzi omude phambi kwemeko
Canneloni kunye namazambane amnandi
Izibilini ezimnandi ezinamafutha, amayeza omntu
Iwayini edibeneyo yewayini
Ukutya okukhawulezileyo kunye okuphumelelayo ukulahlekelwa kwesisindo